DAAWO:Nin Mareykan Ah oo Ku Eedaysan Guurka 4 Haween ah oo Aan Iska War Hayn oo Xabsi Loo Taxaabay | Baahin Media
DAAWO:Nin Mareykan Ah oo Ku Eedaysan Guurka 4 Haween ah oo Aan Iska War Hayn oo Xabsi Loo Taxaabay
Feb 20, 2019 - jawaab
Jariidada Washington Post ayaa sheegtay in ciidanka boolisku ay gacanta kusoo dhigeen nin guursaday afar dumar ah oo aan is ogeyn oo ku kala nool gobollada kala duwan ee dalka Mareykanka.
Michael Middleton oo ka soo jeeda gobolka Maine ee gudaha Mareykanka ayaa guursaday sanadkii 2013 Elissa Grant oo ka soo jeedda gobolka New Hampshire, sida uu ka dalbaday waxey u hadiyeysay gaari, dhar, computer iyo qalab kale oo qaali ah, laakiin muddo kadib ayey ogaatay inuu sii iibiyay.
Markii dhowr isbuuc un laga joogo guurkooda ayuu xaaskiisa garaacid ku bilaabay booliska ayaana qabtay, markii la soo daayayna cidiba wey weyday meel uu jaan iyo cirib dhigay, lacagta uu xaaskiisa ka qaatay waxey gaartay isku day illaa 20-kun oo dolar oo uu rabitaankeeda kaga qaatay.
Grant waxey baadigoob ugu dhaqaaqday ninkeeda si ay uga hesho warqadda furriinka, laakiin waxey ogaatay inaaney ahayn qofka kaliya ee noloshiisa ku jirta, waxeyna go’aansatay iney dhacdada booliska gaarsiiso, booliskuna dhankooda ayey ka baadigoobeen si ay gacanta ugu dhigaan, intaa kadib waxaa soo if baxay labo xaas oo kale oo sheegay inuu qabay, labadan haween waxey ku kala noolaayeen gobollada Alabama iyo Georgia.
Xaaladdu intaa kuma aaney ekaan ee waxaa soo baxay haweenay afaar oo dacwad ka furtay, markii ay daawatay wareysi ay Grand siisay joornaalka Newsweek.
Sidaas oo kale, waxaa la ogaaday in Michael Middleton uu bartay sanadkii 2016 Ashley Claymer (25 jir ah), bil kadibna uu la aqal galay, muddo saddex sanno ah ayaa waxey safar ku mareen dhammaan gobollada kala duwan ee Mareykanka. sanadkii 2017 ayaa waxey dhaleen wiil ay noloshiisa kafaalo qaadeen qoys ku dhaqan gobolka Missouri.
Booliska waxaa u suurtagashay iney ku qabtaan Michael Middleton magaalada Columbus ee gobolka Ohio, isagoo ku eedaysan inuu xaasas badan guursaday. waxaana cadaatay iney soo baxeen ammro kala duwan oo garsoorka ka soo baxay oo la doonayo in lagu qabto oo ay ka mid yihiin; xadgudub qoys, gaari uu ka xeeyay xilli uu sarkkaansanaa isagoo aan haysan ruqsaddii darawalnimo iyo liisanka gaari kaxaynta ee sharciga ahaa.